युवाहरुको प्रश्न : संविधान दिवसमा केको खुसी ?
सरकारले देशभरि हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाइरहँदा सुदूरपश्चिममा भने विरोधका स्वर गुन्जिएका छन् ।संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्ष थरुहटरथारुवान संयुक्त मञ्चले संविधान जारी भएदेखि नै विरोधको आवाज उठाइरहेको थियो । संविधान जारी भएको सातौं वर्ष पुग्दा अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि संविधानप्रति विरोधका स्वरहरु उठाउँदै आएका छन् ।
राजनीतिक दलहरुले संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्नु र विरोध गर्नुलाई नियमित मानिन्छ तर सुदूरपश्चिममा भने यो सातौ वर्षमा नयाँ आवाज सुनिएको छ ।
२०७५ साउन १० मा बेपत्ता र ११ गते मृत अवस्थामा फेला परेकी कञ्चपुरकी ११ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तसहित भर्खरै भारतीय पक्षले तुइन काट्दा बेपत्ता जयसिंह धामीसहितको नामसहितको पम्पलेट देखाउँदै संविधानको विरोध सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय सरोकार मञ्चले प्रदेशको अस्थायी राजधानीमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअगाडि पम्पलेटसहितको धर्ना दिएका थिए । उनीहरुका पम्पलेटमा लेखिएका कुराले संविधानमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो ।
‘संविधान दिवस केको खुसी हो ?, निर्मलाले न्याय नपाएको खुसी हो ? र के तपाईँका दाइलाई तुइन काटेर महाकालीमा बगाएको खुशी हो?’ भन्दै संविधान दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाउन उचित नरहेको उनीहरुले बताइरहेका थिए ।
उनीहरुको ब्यानरमा प्रदेशमा न्यायबाट वञ्चित भएका पीडामात्र थिएनन । उनीहरुले सरकारमाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए । पम्पलेटमा भनिएको छ ‘लाखौ कर्णधार खाडीमा गरिब देशको चौकीदार करोडौँ गाडीमा रु, अझै कति चेलीहरु निर्मला बन्ने, तुइन काटेर बेपत्ता पारिँदा अन्याय भयो भन्ने कि नभन्ने ?’